Gentoo Linux အဆင့်ဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းလမ်းညွှန် | Linux မှ
Gentoo Linux ကို ကို ဦး တည်တဲ့ Linux ဖြန့်ဖြူးသည် အသုံးပြုသူများသည် အချို့နှင့်အတူ အတှေ့အကွုံ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ အရှိန်ဤဆောင်းပါး၌၎င်း၏တပ်ဆင်မှုနှင့်မှန်ကန်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအတွက်တစ်ဆင့်ချင်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေသည်။
၎င်းသည် Tete Plaza မှအလှူငွေများဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပတ်စဉ်ပြိုင်ပွဲ၏ဆုရရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်လာသည်။Linux အကြောင်းသင်သိသမျှကိုမျှဝေပါ«။ ဂုဏ်ယူပါတယ် Tete!
ပထမ ဦး စွာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Gentoo Wiki (သို့) Arch Wiki ပေါ်တွင်လိုအပ်တာအားလုံးသည် Gentoo လက်စွဲတွင်ဖြစ်သည်။ ငါကဒီသင်ခန်းစာကိုလုပ်တယ်။ လူအတော်များများကအဲဒါကိုတောင်းပြီး၊ Gentoo ကိုသွင်းတဲ့အခါငါစိတ်ကြိုက် granite ထည့်မယ်။
စာဖတ်သူများသည်ဤအပျက်အစီးတွင်အလွန်အမင်းတန်ဖိုးထားခံရသည်ကိုသိထားပါ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ပြdistနာအများစုကိုဝီကီကိုဖတ်ပြီးသုတေသနအနည်းငယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည့် distro တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တစ်ခုခုမေးမြန်းပြီး“ ဝီကီကိုကြည့်ပါ” ဟုဖြေဆိုပါက Gentoo အသုံးပြုသူအနေဖြင့်သင်သည် အမှုအရာညာဘက် xD) လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဤသည်မှာ“ ရိုးရှင်းသော” မေးခွန်းများကိုအဖြေမပေးဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်များပြားလှသောစာရွက်စာတမ်းများကစာဖတ်သူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
ယခုငါ Gentoo အကြောင်း၊ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြင့်မှတ်ချက်ကိုသွားတော့မည်။ ဤသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာထူးခြားသနည်း၊ ၎င်းသည်အခြား Linux distros များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Gentoo သည် source code ကို အခြေခံ၍ distro ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆလိမ့်မည်။ ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ထိုကဲ့သို့သော Debian, Ubuntu, Arch, Manjaro, Fedora, SUSE နှင့်ရှည်လျားသောစသည်တို့ကဲ့သို့သောသမားရိုးကျ distros များ (ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း) နှင့်မတူခြင်း၊ package တစ်ခုကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည် executable (binary, .deb, .rpm, .pkg.tar.xz စသည်) ကို download လုပ်၍ မထည့်သွင်းပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ source code ကို download လုပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်၊ package များအတွက်သတ်မှတ်ထားသော၎င်းနှင့်အတူ executable ကိုထုတ်ပေးသော rules များကို install လုပ်သည်။
Gentoo သည်ထူးခြားသော distro ကိုပြုလုပ်သည်မှာ package များကို compile လုပ်ရုံသာမက package တစ်ခုချင်းစီ၏ပါ ၀ င်မှုများကိုထောက်ပံ့ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါစိတ်ကြိုက်နှင့်ပြုစု၏တိုက်ရိုက်အကျိုးဆက်
packages များ, မြန်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဒါကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရအောင်။
X သည် precompiled distro (ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း) ဖြစ်သဖြင့် X distro ကိုအမျိုးမျိုးသောစက်အမျိုးအစားများတွင်တပ်ဆင်နိုင်မည်ဆိုပါက၎င်း၏ packets များကိုအဟောင်းစက်၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်စုစည်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့ကို Pentium II မှနောက်သို့ run စေလိုပါက၎င်းတို့၏ package အားလုံးကို Pentium II ညွှန်ကြားချက်အစုံနှင့်ပြုစုလိမ့်မည်။
ဒီကဘာအကျိုးဆက်များကိုဆောင်ကြဉ်းသနည်း အသစ်များဖြစ်သောပရိုဆက်ဆာများတွင် i7 ဆိုပါက packets များသည်နောက်ဆုံးပေါ်ပေးထားသောစွမ်းရည်အားလုံးကိုအသုံးချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည် i7 မှပေးထားသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်စုစည်းပါက၎င်းတို့ကိုကွပ်မျက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆုံး၌ဤအသစ်သောညွှန်ကြားချက်ကင်းမဲ့သောကြောင့်, ဒီတစ်ခုမတိုင်မီပရိုဆက်ဆာ။
Gentoo သည် source code ကို download လုပ်၍ သင်ရှိသည့်ပရိုဆက်ဆာအတွက်စုစည်းခြင်းဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပြည့်အဝကိုရယူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်က i7 တွင်တပ်ဆင်ပါက၎င်းသည်ညွှန်ကြားချက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်၊ ၎င်းကို Pentium တွင်တပ်ဆင်ပါက II ကကအဆုံးစွန်သောမှသက်ဆိုင်ရာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင် package များရှိချင်သောထောက်ခံမှုအမျိုးအစားကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ ငါ KDE နှင့် Qt ကိုသုံးသည်။ ထို့ကြောင့် package များ၌ GNOME နှင့် GTK အထောက်အပံ့များရှိမရှိကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် Gentoo နှင့် distro X တို့တွင်တူညီသောအထုပ်ကိုနှိုင်းယှဉ်သောအခါ Gentoo အထုပ်သည် ပို၍ ပေါ့သည်။ distro X တွင် package များသည်ယေဘူယျဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးအတွက်အရာအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ယခုငါမိတ်ဆက်စကားပြောပြီးလျှင် Gentoo ကို Linux Live CD (Ubuntu, Fedora, SUSE, Backtrack, Slax သို့မဟုတ်၎င်းတို့နှင့်ဖြစ်ပျက်သမျှ) မှမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ဟူသော PDF လမ်းညွှန်နှင့်အတူပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်၏ configuration ဖိုင်များနှင့်ဆက်စပ်သောလင့်ခ်များကိုချန်ထားသည်။ သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည် Linux distro ထည့်သွင်းထားသောအခန်းကန့်မှဖြစ်သည်။
Gentoo တပ်ဆင်ခြင်းသင်ခန်းစာကိုရယူပါ ငါ၏အ setting ကို download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Gentoo Linux အဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်းလမ်းညွှန်
Juan Manuel လိုပက်ဇ် placeholder ပုံရိပ် ဟုသူကပြောသည်
asus n61jv မှတ်စုစာအုပ်တွင် optimus နည်းပညာဖြင့် nvidia drivers များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုမည်သူကသိသနည်း။ ဗီဒီယိုကဒ်ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။ intel ကဒ်ကိုသုံးပြီးဘက်ထရီကိုစားတော့မယ်။
Juan Manuel Lopez ကိုပြန်ပြောပါ
wow ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုငါရှာနေခဲ့တာပဲ၊ ငါ windows user တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီ distro ကငါ့အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်ပြီ၊ ငါကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
ကောင်းတယ် !!! Gentoo ကို CHROOT ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ကျွန်ုပ် install လုပ်သော live CD နှင့် hahaha ကို download လုပ်သောကြောင့်ဗိသုကာ (ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်) ကြောင့်အမှားတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဒီတော့ installation ကို restart လုပ်ပါ၊ ခဏကြာရင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီသင်ခန်းစာကိုလိုက်နေတယ်၊ ​​gentoo ကို install လုပ်ဖို့အကြိမ်များစွာကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်၊
သူငယ်ချင်းကျွန်ုပ်သည်တရားဝင်စာမျက်နှာမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ကြိုးစားနေသည် (ကျွန်ုပ်ထင်သည်): https://www.gentoo.org/downloads/
မေးခွန်းမှာမည်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ် download လုပ်ပြီး၊ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားခြားနားချက်မှာအနည်းဆုံး installation CD၊ Hybrid ISO နှင့် Stage3တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အား link တစ်ခုပေးလျှင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ အင်ဖိုနှင့်အတူ။
LibreOffice 4.0 သည်အသွင်အပြင်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်